Nke ahụ dị mma Nokia Moonraker smartwatch anya, kagburu oru ngo | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ otú Nokia Moonraker smartwatch si lee anya, kagburu ọrụ ngo
Na ụwa nke teknụzụ, ụfọdụ ihe na-aga nke ọma, ihe ndị ọzọ na-emebi ma mgbe ụfọdụ ha na-agwụcha anaghị arụ ọrụ. Nke a bụ ihe mere Nokia Moonraker, smartwatch nke kagburu n'agbanyeghị na ọ bụ ngwaọrụ na-aga nke ọma. A na - agbakwunye ọhụụ ọhụrụ a na folda «Nokia», ụlọ ọrụ nke na - eyighị ka ọ ga-anwụ, ọ bụkwa na ọ nwere ịhụnanya nke ọtụtụ nde ndị bụbu ndị ọrụ gburugburu ụwa bụ ndị na-ekwenyeghị na akara ugbu a gbasara ndị na-azụ elektrọnik na ekwentị mkpanaaka. Lelee vidio a ma nwee ekele maka Nokia Moonraker na-agba ọsọ, smartwatch nke nwere ike ịbụ na ọ bụghị.
A na-emepụta ngwa ọrụ a n'oge 2013, naanị mgbe Microsoft nwetara ụlọ ọrụ Finnish ruo nkewa mobile. Nke a nwere ike ịkọwa ihe kpatara njirimara onye ọrụ ji dị mfe, n'eziokwu ọ na-enye WinPho obere ntụ. Ejiri plastik mee ngwaọrụ ahụ, agbanyeghị, anyị na-ahụ dị ka afọ atọ gara aga, ọ dịchaghị anya na ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta taa, dịka ọtụtụ Sony smart watches.
Iji na-agagharị na klọọkụ, nwamba ndị dị mfe ga-eme anyị, n'oge smartwatches bụ ọrụ karịa eziokwu. Ọzọ ikpebi akụkụ bụ na o nwere NFC, ma cheta, sistemụ arụmọrụ nwere obere ma ọ bụ ihe ọ bụla jikọrọ ya na watchOS ma ọ bụ Android Wear.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ hapụrụ anyị n'ọnụ anyị ka anyị hụ ka igwe elekere Nokia siri gaa, elekere na-eruteghị n'ahịa ma anyị amaghị ihe kpatara ya, tụmadị na Microsoft ewepụtala uwe ndị ọzọ nke ọ na-enwetabeghị kwa miri n'ime ndị na-azụ ahịa. Ikekwe ụlọ ọrụ Redmond kwesịrị iketa ọrụ a wee kwaa ya ka ọ ghọọ ihe na-atọ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Nke a bụ otú Nokia Moonraker smartwatch si lee anya, kagburu ọrụ ngo
Kedu ihe oku WiFi na gịnị ka ha bụ?